Maxad Kataqana Madaxda Afrika ee ku Guulaystay Horyaalka Xukunka Bahdilnimada. |
8 Siyaabood oo Looga Hortago Wahsiga
Ayaanle Cabdi — January 30, 2016
Jean Bedel Bokasa: Waxuu ahaa madaxweynahii hore ee dalka (Jamhuuriyada bartamaha afirka) ninkaas oo mar dambe keligii isu caleema saarey inuu yahay boqorka wadankaas waxaa marka taariikhihiisa laga hadlayo lasoo qaataa inuu xasuuqay ardayda dalkaasi isagoo amar ku bixiyey in ardayda toos loo toogto. Dadka ay ciidankiisu laayaan gaar ahaan mucaaradkiisa ayaa wararka qaar waxa ay sheegaan hilibkooda inuu cunni jiray, si aan looga daba-hadlin oo dadku uga baqdaan.
Sedex Alifle Samuel Doe: Waa madaxweynahii hore ee dalka (Liberia) wuxuu dalka ku qabsaday xoog, dad ku mudaaharaaday inqilaabkiisa ayuu cagta mariyey. Dadkii meydadkoodii ayaa loo diiday in la aaso, oo qaarkood halkii bay ku qurmeen. Madaxdii uu inqilaabay ee la toogtay ayuu meydadkoodii ku soo guray baabuur iska rogo ah, waxaana lagu soo bandhigay carwo ahaan suuqyadda magaalooyinka iyadoo ninkaas aaqirkii siduu uu dadka u dili jirey isagana ay u dileen mucaaridkii dawladiisa ridey.
Iidi Amiin Daada: Madaxweynahii hore ee dalka (Uganda) wuxuu xasuuqay ardaydii jaamacadda weyn ee Mackarere, wuxuu amray in toos toogasho loogu geysto ardayga soo hadal qaada oo mucaarada dawladdiisa. Maxaabiista loo xiro arrimo siyaasadeed waxa lagu ciqaabi jiray in dubbe ama burus weyn madaxa lagala dhici jiray, markay maskaxdu burburto ayaa meydadkooda yaxaaska quraac loogu dhigi jiray.
Axmed Xeyda: Madaxweynahii hore ee dalka (Muritania) wuxuu hirgeliyey inay bulshada dalkaasi kala sarayso, oo dadka madow ay ka hooseeyaan carabta cas, isagoo amray in dadka madow sida xoolaha suuqyada loogu kala iibsado. Haddii qof madow ah guri ku dumo ama ceel uu ku dhaco wuxuu sharci ka dhigay inaan la samatabixin, balse goobta la calaamadiyo sidii qabriga oo kale.
Cali Saalax : oo ahaa hogaamiyahii hore ee Jasiirada ( Comoras Islands) wuxuu sheegtay derejo ilaahnimo iyo macallin wax walba yaqaan. Shacabkiisa wuxuu ku khasbi jiray inay ugu yeeraan wax walba ogaade. Balse dadku way ka diidi jireen, marka laga reebo tiro yar mooye. Ciddii magacaasi ugu yeeri weyda waxa lagu fulin jiray ciqaab ah in isagoo nool jirkiisa xubin xubin loo jar jaro.
Kamusu Banda (Malawi) : kursiga Madaxweynaha ayuu ku raagay. Wuxuu soo saaray sharci dhigaya inuu Madaxweyne ahaado intuu nool yahay, markuu dhintana rooxaantiisa ayaa Madaxweyne noqonaysa. Wuxuu ahaa shaydaan weyn oo ku xiran faaliyeyaasha iyo dadka xiddigiska yaqaan. Nin kasta oo doona inuu siyaasada dalkaasi soo galo, ee meelahaasi ka hadla wuxuu u diri jiray qof si hoose u khaarajiya.
P.W.Both: Waa madaxweynahii hore dawladii midab kala sooca ku caanka aheyd ee dalka koonfur afrika (South Africa) wuxuu sharci ka dhigay inay shacabkiisu is-gumeystaan oo ay kala sareeyaan.
Wuxuu ahaa aabihii hirgeliyey nidaamkii gabbalkiisu dhacay ee midab-takoorka (Apartheid). Wuxuu amray qofkii madow ee dhinta inaan la aasin ee la iska daayo ilaa uu qurmayo ama dugaagu cunayaan , Sababta ayuu ku sheegay inuu dhulku ka sharaf badan yahay, oo aanu wax qiimo ah lahayn. Wuxuu si bareer ah ugu khudbadayn jiray in dadka madoobi ay yihiin daanyeero aan meelna ka soo gelin bini’aadamka markaa ay habboon tahay inay dib ugu noqdaan dhulkoodii ay asal ahaan lahaan jireen ee ahaa duurka.
Next post Midowga Yurub Ayaa Jaray 20% Mushaarkii AMISOM * Maxay midowga Yurub u maal Gelini waayeen Ciidamada Soomaaliyeed?
Previous post Aqoonyahaan Sifooyin cajiib ah ka bixiyay Damaca Siyaasadeed ee Dowlada Ethiopia